We Fight We Win. -- " More than Media ": သံရုံးက ဗီဇာဆက်လက်ပိတ်ထားဆဲ
ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က မင်းသမီးထွန်းအိနာဗိုလ် ၊ သူခင်ပွန်း ကိုအောင်မင်းထွန်း နဲ့ ကလေး ကို အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုက ဗီဇာ ငြင်းလိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
အောင်မင်းထွန်းရဲ့ မိဘတွေက ယခင်အစိုးရဟောင်းနဲ့ မကင်းကြသူတွေ ဖြစ်တာရယ် အောင်မင်းထွန်းကိုယ်တိုင်က အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုမှာနေစဉ်က နိင်ငံရေးခိုလှုံ ခွင့်လျောက်ထားပြီး မြန်မာ ပြည်ကို
တိတ်တဆိတ်ပြန်လည်ဝင်ရောက်ခဲ့တာတွေကို သံရုံးက ရှာဖွေသိရှိခဲ့လုို့ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ထွန်းအိနာဗိုလ်ဟာ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အတွက်မဲဆွဲ ပေးခဲ့ပါသေး
ဦးသိန်းစိန် အစိုးရက ပြောင်းလဲပါပြီလုို့ ဆိုနေပေမဲ့လဲ နိင်ငံခြားရောက်မြန်မာ့ ဒီမိုအများစုကို
ဗီဇာတွေထုတ်မပေးပဲ အချိန်ဆွဲတာ၊ အမှုဟောင်းတွေ မီးထွန်းရှာတာတွေကိုလုပ်နေဆဲဖြစ်ပါတယ် ။ အပြန်အလှန်အားဖြင့် အမေရိကန်ကလဲ အစိုးရဟောင်းနဲ့ ခရိုနီတွေကို ဗီဇာတွေဆက်ပိတ်ထား ပါတယ်။ ဒီအပတ်ထဲမှာပဲ ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းထွန်းကြည်အမျိုးတွေကိုလဲ ဗီဇာငြင်းလိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အပြောင်းလဲ
တွေကို လက်တွေ့ မလုပ်ပြသမျှ ဗီဇာကိုဆက်ပိတ်ထားမယ် လို့အမေရိကန်သံရုံးတာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်။
( ကွန်ပြူအခက်ခဲ ကြောင့်နာမည်စာလုံးပေါင်းအထပ်ဆင့်မပါတာကိုသည်းခံဖတ်ရှု့ 
GOOD, GOOD, BELLY, GOOD
BELLY, BELLY, GOOD.
bal thu ka pyaw dar lal. name ya ma news ko tin thint dal. otherwise, it can consider you are lying.